Muuse Iyo Dowladii Laga Filayey !!! Qore:- (Mukhtar-Africa) | Berberatoday.com
Muuse Iyo Dowladii Laga Filayey !!! Qore:- (Mukhtar-Africa)
October 7, 2019 - Written by Berbera Today
Waxa la yiri: Nin Soomaali indheer-garad hore ah (IHU)oo wiilal badan leh baa markuu gaboobey oo dardaarankiisii joogey isugu yeedhay wiilashiisii. Wuxu yiri nin waloba intaas oo laamood oo dhuur ah ii keen. Markii wiilashii mid waliba dhuurtiisii keenay buu yiri: Isku wada xidha dhuurta, markaasaa laysku wada xidhay. Isaga oo curadka ka bilaabaya buu yiri nin waloba markaaga isku day dhuurta in aad jebiso. Raggii mid xoog weynaa iyo mid xoog yaraaba waa isku dayeen dhuurtii in ay jebiyaan waana jebin kari waayeen. Markii ay ka quusteen buu yiri nin walowba laantaadii dhuurta qaybtaadii qaado oo gooni u xidh. Markii nin waliba qaybtiisii gooni u xidhay buu yiri hadaba mid waloba kaaga isku day in aad jebiso. Kolkaasa ileyn midkiiba dhawr laamood bay ahaayeene, mid waliba kiisii jebiyey. Odaygii markaasuu yidhi hadaba iska daadiya dhuurta oo ii dhegaysta. Dhuurtu markay isku wada xidhnayd sow ma aydaan jebin kariwaayin? Wiilashiina mar kaliya haa bay ku jawaabeen. Markii mid waliba kiisii gooni u xidhayna sow mid waliba kiisii ma jebin,? Dhaman haa bay ku jawaabeen.Odaygii wuxu yiri (Ulahaasi dhuurta ahi Waa wiilashayda oo dhan’e , Haddii aad wada jirtaana cidi idin jebin mayso ,Haddii aad kala jirtaana saas saad u jabaysaan.) Tulucdayda sheekadu waxa weeyi :-
(” Xigmada Bi’iadamka kuma jirto in Qabiil gaari ahi ay boobto waxay umadi ku heshiisay , haday dhacdana xoolo ama xukunba , Cimrigeedu ma dheeraado. Qofkasta oo muwaadin reer Somaliland ahi , oo aan ahayn beesha muuse biixi , waa inuu u diyaar garoobaa sidaan Iskaga qaban lahayn , Askarigan iyo tuugta beeshiisa ah waa Subeer Awale’e , Caadaysatay , boobka iyo Jebinta Sharcigii , dastuurka, haykalkii dowladnimana meel kaga dhac’day , nidaamkii aan ku heshiinay dhamaan beelaha degga Somaliland-na ) Akhristoow Su’aashu taagani hada korna ku xusani waa Askariga xusuustiisii hoos u dhacday iyo Sakhradaadii Qabiilka maxaa kaaga hirgalay?!?!?!? Muwaadin Askarigu waa taasi sida uu u baabiyey qoyskiisana sharcigana ugu jabiyey waa sidatan:- cida aan u jeedo , Hadaba Wax ha ka barato Cuqdad , cunfiga qaan gaadhay ee Askarigu ku hayo beelaha degga somaliland , xubnaha reerkiisa Qabyaaladiiste MUUSE BIIXI , Iyo Xukunkii Somaliland Oo Hal Reer Ku soo ururay SUBEER AWAL . Balaybaydh bal eeg adba Mar hadii madaxweynihii sidan qabiili u yahay maxaa hadhay ?!?!?!? Oo aad sugtaan , kaaga darane dalkii way baabiyeen waana sidatan:-
1.Wasiirka Maaliyadda 2.Wasirka Bosaha, Isgadhsiinta & Teknolojiyad 3.Wasiirka Warfaafinta iyo Dhaqanka 4.Wasiirka Gaadiidka&Hormarinta Wadooyinka 5.Wasiir Ku Xigeenka A/Gudaha iyo Amniga 6.Hanti Dhawraha Guud ee Qaranka 7.Mareeyaha Hawada iyo Madaarada 8.Mareyaha Kahortaga Abaraha & K/Rashinka 9.Gudoomiyaha gobalka gabiley 10.Gudoomiyaha Gobalka Salal 11.Gudoomiyaha Gobalka Saraar 12.Gud ku xigeenka Gobalka Maroodijeex 13.Safiir ku xigeenka Ethiopia 14.Aggasimaha guud ee Madaxtooyada 15.Aggasimaha guud Ee caafimadka 16.Aggasimaha guud ee Maaliyada 17.Aggasimaha Guud Maalgashiga 18.Agasimaha Guud e Shaqada & A/Bulshada 19.Aggasimaha Guud ee Qorshaynta Qaranka 20. Agaasimaha Guud ee Waxbarashada 21. Agaasimaha Guud ee Bangiga Dhexe 22. Agaasimaha Guud ee Gaadiidka/Q liisank 23. Agasimaha Gud e Mihnahada Cafimadka 24. Gud ku xigeenka Haayada tayada 25. Guddoomiyaha Maxkamadda Sare 26. La Taliyaha Madaxweynaha ee Amniga 27. La Taliyaha Madaxweynaha ee Sharciga 28. La Taliyaha Madaxweynaha e Dhaqaalah 29. La Taliyaha Madaxweynaha ee Somalia 30. Guddomiye kuXigeenka Maxkamada Sare 31. Maayarka Caasimadda Hargeisa 32. Taliyaha Guud ee Ciidamada Qaranka 33. Taliye ku Xigeenka Booliska Somaliland 34. Taliyaha Ciidanka Dabdamiska Qaranka 35. Taliye ku xigeenka Sirdoonka Qaranka 36. Ku xigeenka Xeer ilaaliyaha Guud 37. Safiirka Somaliland ee Imaaraadka 38. Chief of Staff ka Xafiiska Madaxweynaha 39. Gudoomiyaha Mihnadlayasha Cafimadka 40. Garyaqaanka Guud ee Qaranka 41. Ku xigeenka xisaabiyaha Guue ee Qaranka 42. Safiirka Djibouti 43. Safiirka Sweden 44. Maarreeyaha Dekadda Berbera 45. Maarreeye ku xiggeenka Hay’adda tayada 46. Komishanka Qabdaraasyada Qaran ka (2 xubnood) 47. Konishabka Maamul wanaagga (3 xubnood) 48. Komishanka Aids-ka (4 xubnood) 49. Komishanka Tacliinta Sare. 50. Maarreeyaha wakaaladda Biyaha Hargaysa. 51. Maarreeyaha Cusbitaalka Guud ee Hargaysa 52. Guddoomiye xiggeenka Gob. Gebiley 54. Guddoomiye xiggeenka Gob. Saaxil 55. Maarreeyaha Dawan 56. Maarreeyaha Radio Hargaysa 57. Maarreeyaha Mashruuca PFM. Ku darsoo 43 qandaraas oo Millions ku baxay uu siiyey Qandaraasyo beeshiisaa
Kolkaynu u fiirsano sawirkii hore ee somaliland waxay ahayd Sawir wacan . intii kulmiyey-yase waxa inoo muuqanaysa 4 sano ee muuse dalka haystay , silic , saxariir , rafaad , balan-bal iyo umadeenii oo lee’aaday !!! xaqiiqduna waa sidaa intii xirsi ka danbaysay 16 / 10 /2015 Ilayn askariga ayaa talinayaayey iyo Aamina waris’e , waxaan taasi ku cadaynayaa ninkani Habqanta ahi ee maaaliyada laga dhigay , markii hore Arimo dibadeed ku fashilmay , wuxuu u gaystay Askarigani Hamaanimada u waysaystay inuu maaliyada ka dhigto waa Askarig’e tuugaasi Sacsaca la dhaho , Habqanta ahi, waxaan ognahay Hadaba Akhriste ama muwaadin inuu kani uu maalka u dhiibtay uu yahay mid xataa xafiiska waraaqda ku sexeexin markuu hoydo ama rawaxo ayuu sexeexaa , boorsadana sidaasi ayuu askarigu afka ugu dhiganayaa , kii hore ee Jaanjaanka ahaa Askarigu ayaa show Abti ruma u ahaa oo garasho iyo aqoon maaliyada uguma dhiibane , waa tuumbada wiilkaagu ha kuu hayo kaag ama furaha!!! Akhriste ama muwaadin maqaalkayga waxaan kusoo dabaalayaa xigmadan “waa in kacdoon Xigmadeed, ilhaamin eebe inagu manaystay , lagu qaadaa tuugtaa masaakiinta dhacaysa , sidaasina aan ugu hiilinaa dalka iyo dadkaba , Anigu waxaan qabaa inay dhowr bilood inagu qaadan doonin.”
GEBO-GABO :- Waan ognahay sida maanta xaalkeena guud yahay ama heshiiska degsan oo lagu socdaa dhigayo waa heshiis Qabiil gaara ku tashadeen in Shaadh maamul lagu dhaxo reer , waar siday u dhacaysaa reer reer dhaca ?!??!?! Jawaabtuse reer Somaliland marnaba ka yeeli maayaan beel, Beelo badan dhacdaa ma suuro galayso Askarigan fuqataaya ka aabaha yahay . Waxa dharaarta ka cad sida askariga iyo beeshiisu maanta in aad wada aragtaan in heshiiska qabiilkii sidii uu u yaalo . Askariyoow qabiilnimadaadu haday quraan tahay , umada kalena Ma baybal baad mooday???
Hadii afka uun laga hadlo ficilna loo bedelin inta Subeer Awal ahayn inay tuugtaasi iska qabato maxaa diidaya?!?!?!
Hadii laga seexdana sida loogu socdo oo aan waxba iska
bedelin. Qaybta dambena waa sida uu
berri noqondoono, haddii mashruuca
Muse Beeshiisa , sida ay ugu tala galeen u
fulo, qawsaaro Soomaalilaaneey-na ku taageeraan sida hadeer muuqata. Hadaynu nidhi qorshihii guud ee Muuse reerkiisu 4 sano ee uu askarigu dalka maamulo , intan danbe ee dalka iyo dadkuba waa qaybsameen waana la dhacay dalkii 60%, markhaatina ay u tahay markhaatina ay u tahay 10 sano ee u danbeeyey halka taliska Askarigu ku ekaa. Maanta waxaynu odhan karnaa intii hadhsanayd 40 % baa uu sidaa ku hirgalayey Askarigu siduu u fasixi lahaa , sida gacan yaraha askarigu wiil la dhaho Sonsaf + mubaarik oo dalka baabiyey uu ku cadeeyey waraaq uu u sexeexay qolooyin Gem-stone , khayraadka qodanaysay u sexeexay wasaarada maaalgashigana amar ku siiyey, hadase inuu askarigu sii dhex mushaaxo inaga ayaa u sabab ah ma beenba akhristoow ???? ku daraoo wuxuu askarigu cunfigiisa iyo cuqdadiisa ku guulaystey, wadankiina laba qaybood baa laga dhigay. Laba Mansab oo kala ah sidatan:-
1) Muwaadinka koowaad oo beesha Askariga Jaahilka ah Ee ku sakharaansan Qabiilka , Askarigani malaha beelo ba’ay ayuu ka hadhay.
Inta aan beesha muuse ahayni Waa muwaadiniinta 2aad Darajooyinkani ayuu sameeyey Askarigani Aflaxaarkii.
Saddexdii gobol ee SSC muwaadin faraha ayey ka baxday , bal ka warama ?? hadii reer somaliland loo diiday , Ergadii heshiiska beelaha walalaha ah , dagaaladii Degmooyinka ” Dhumay ” oo ciidan Amison ahi la keenay oo itoobiya ah , dadkii itoobiyanka ahaana ergadaa ku jiraan.
Akhristoow waxaa kuu sheegayaa in dalku ku daayey, Arimahan aan ku cadaynaayo Anigu aan hubo waa sidatan :-
a) Mar hadii diplomaasiyadii dibadu xidhantay meelkasta
b) in Amison Gobolada beriga lagu wareejinaayo , iyo
c) Lacagtii EU siin jireen wadanka Madagaskar ay ingiriisku ka codsadeen in 4 sano ku soo wareejiyaan , ilayn waa kii askarigu ka dhex qaaday ciidankii dhex joogay dhumay’e Gobolada SSC si nabadooda loo ilaaliyo Amison-na uga howl gasho. d) danta Ingiriisku ay tahay , Shirkadooda shidaalka ay sidaa ku bilowdo qodidii shidaalka Hol-hol) Goboladaasina Somalia maamusho Somaliland La wada leeyahay waa dhimatay !!! Soo celinteeduse waxay ku xidhan tahay sidatan : Abwaan Kaariye (IHU) Maansadiisii Dharaarbaa iman doontaa …
Waajibka ugu wayn ee manta saran qof kasta
oo Beesha Muuse Biixi aan ahayn meel uu jooga ba, waa
badbaadada Jamhuuriyadda somaliland, midii ishaysatay siduu rayaale kaga tagay dalka , isagoon waxba ka hagran awood wuxuu Alla ku mannaystey!… waanan hubaa inaan birta dhaafinayno .
Taasuna waa inuu bilaabo HADDA haddusan
horey ugu jirin.
Waddaniyiintu, meelay joogaan ba aduunka muruq iyo maalba
waa inay heegan noqdaan!!!…
” INKASTUU DUR DUR IYO DABAAL GALLO DOOFAAR ABIDKII , MA DAAHIRO “
Mukhtar Ali Aden (Africa)